'Kingsman: The Golden Circle' ၏ဗီရို စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ပထမအပိုင်းသည်ဘားကိုအလွန်မြင့်မားစွာထားသော်လည်းပုံရသည် 'Kingsman: The Golden Circle' ၏ဗီရိုသည်ယင်း၏ယခင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်ပင်ကျော်လွန်လိမ့်မည်.
မVaဲ Vaughn, ရုပ်ရှင်နောက်တဖန်ညွှန်ကြားခဲ့သည် စိတ်ကျေနပ်စရာရူပနှင့်အတူတင်လာမည့်ကျဆုံးခြင်းရုပ်ရှင်ရုံ hit ထိုစကားလုံး၏အကျဆုံးအကျဆုံးအဓိပ္ပာယ်နှင့်ပုံမှန်ကွင်းပြင်တွင်နှစ်မျိုးလုံးရွေ့လျားသည်။
Taron Egerton သည်အနီးအနားရှိယောက်ျားလေး Eggsy ၏အခန်းကဏ္prကိုပြန်လည်ပြောပြသည်။ သူသည်သူလျှိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှစုဆောင်းခံရပြီးနောက်အကောင်းဆုံး Mr Porter ဝတ်စုံအချို့ကြောင့်မနာလိုဝန်တိုသောအဝတ်အစားဖြင့်သန့်စင်သောအေးဂျင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
ပထမပိုင်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဇာတ်ကောင်သည်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန်အရသာကိုရရှိသည်။ ထိုနောက်ဆက်တွဲ၌ဤပြသထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်သူအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်များမရှိဘဲအနုပညာတစ်ခုပြီးသားဖြစ်ကြောင်းရှင်းနေပါသည် လိမ္မော်ရောင်ကတ္တီပါညစာစားအကျီ - နောက်လာမည့်ပါတီရာသီအတွက်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည် - နှင့်ရင်ပတ်ဆတ်နှစ်ကျော့ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ဤဝတ်စုံ။
သရုပ်ဆောင်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သည့် Colin Firth နှင့် Mark Strong တို့သည်ရုပ်ရှင်အင်္ကျီပိုစတာများတွင်သိုးမွေးကုတ်အင်္ကျီနှင့် plaid ကုတ်အင်္ကျီအသီးသီးရှိသည်။
ပုံမှန်ပုံသဏ္looksာန်ရှိသော်လည်းပုံသဏ္ဌာန်တူသောစကားလုံးဖြင့်တူညီသောပုံသေနည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းထက် \_ t 'Kingsman: The Golden Circle' ၏ဝတ်စုံများသည်ပထမအပိုင်း၏အကျယ်အဝန်းကိုကျယ်ပြန့်စေရန်ရည်ရွယ်သည်.
Channing Tatum သည်အော်စကာဆုရှင် Halle Berry နှင့် Julianne Moore တို့နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ထားသောမျက်နှာအသစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင်ရဲ့ဗီရိုဟာအမေရိကန်သာဖြစ်မယ်။
Un ခေတ်သစ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီအင်္ကျီအဘယ်သူ၏အပြာအနက်ရောင်သာအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီအားဖြင့်ကြားဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေက ဦး ထုပ်၊ လက်ပတ်နာရီနှင့်ခါးပတ်ကြိုးကဲ့သို့သောအားနည်းချက်များဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » 'Kingsman' ၏နောက်ဆက်တွဲသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးစတိုင်လ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်မည်လော။